Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu qab qabtay hawlgal laga sameeyay Xerada Dhagaxley ee dalka Kenya - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararka inaga soo gaaraaya dalka Kenya, ayaa waxay sheegayaan in Ciidamada Booliska Kenya ay maanta hawlgal ballaaran ka sameeyeen Xerada Qaxootiga Dhagaxley ee Degmada Dhadhaab ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Hawlgalka waxaa lagu soo qab qabtay dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah, oo siyaabooyin kala duwan looga soo dhex qab qabtay jiingadaha iyo cooshadaha ku dhex yaala Xeradaasi Dhagaxley.
Booliska, ayaa waxay baadigoob ugu jiraan koox dhalinyaro ahayd oo shalay galab askari ku dishay, mid kalana ku dhaawacday Xerada Dhagaxley, waana taa midda keentay hawlgalka.
Dhalinyaradii hawlgalka lagu soo qab qabtay, ayaa waxaa su’aalo lagu weydiinayaa Saldhig uu Boolisku ku dhex lee yahay Dhagaxley, waxaana dhalinyarada wax laga weydiinayaa waxa ay ka ogyihiin dilka iyo dhaawaca askarta.
Intii hawlgalku uu ka soconaayay Dhagaxley, ayaa waxa uu culeys ku keenay qaxootiga Somaliyeed ee ku nool, waxaana la arkaayay askarta oo wadooyinka jartay, su’aalana weydiinaaya qaxootiga.
Quraacda Subixii Oo Noqon Karta Mid Dhinta Miisaanka